Ankadimainty Mahitsy Lehilahy hanatitra « versement » maty voatifitra
Vaky trano sy halatra biby fiompy 3 lahy nidoboka am-ponja
Saron’ny polisy ny fikambanan-jiolahy mpamaky trano ao Imanja. Lehilahy miisa telo no tra-tehaky ny polisy any an-toerana ny alahady 15 septambra lasa teo noho ny famakiana trano.
Fanendahana teny 67ha Andrasana izay ho sazin’ilay jiolahy mody mamo
Natolotra ny fitsarana omaly talata 17 septambra ilay lehilahy mody mamo manararaotra manendaka eny 67ha. Raha tsiahivina, ny 15 septambra teo tamin’ny 5 ora hariva nahasamborana azy teo am-panaovana ny asa ratsiny izy no nisy ny antson’ny tsara sitrapo ka tonga ny polisy.
Kidnapping teny Ambohidratrimo Nandraviravy 6 tapitrisa Ariary ny zandary ilay jiolahy
Voasambotra teo Ankadibe Ambohidratrimo afak’omaly atoandro ilay mpaka an-keriny nikasa hanolana zazavavy 17 taona teny Andakana ny zoma teo.
Analavory Tra-tehaka ireo dahalo 2 mpamatsy omby halatra ny renivohitra
Dahalo raindahiny roalahy no voasambotry ny zandary tao amin’ny paositry ny zandary Analavory distrika Miarinarivo ny alakamisy 12 septambra teo. Nandritra ny famotorana natao no niaiken’izy ireo ny heloka vitany ka nilazany fa saika hamidy aty Antananarivo ireto omby vositra ireto.
IHOSY Sarona ny atidohan’ny varo-drongony
Ny fanomezam-baovaon’ny olona tsara sitrapo sy ny fanadihadian’ny polisy no nahafantarana ny atidohan’ny varotra zava-mahadomelina tao Ihosy.
ANDRAVOAHANGY Voavonjy ilay dokotera vavy noratrain’ny mpanendaka
Efa tsy misy ahiana ny ain’ny mpiasan’ny fahasalamana iray noratrain’ny jiolahy tamin’ny antsy.
Ady amin’ny zava-mahadomelina Rongony 3 taonina tra-tehaky ny zandary
2 980 kg no vesatry ny rongony 150 000 fototra nongotana milanja 1 680 kg sy zavamahadomelina maina 1 300 kg nokasaina hamidy tany amin’ny ditrikan’Ambanja sy Ambilobe.
Hatairana ny an’ny olona teny Ankadimainty Mahitsy omaly atoandro naheno feo nipoaka mafy dia mafy taorian’ny fandalovana moto iray.
Noheverin’ny olona ho nipoaka ilay moto nentin’ny lehilahy iray, kinanjo tsy izay no niseho fa lehilahy iray efa nivalampatra tamin’ny arabe miaraka amin’ilay soavaly nentiny. Rehefa nojeren’ny olona, dia nisy nitifitra izy ka tsy tana ny ainy. Olona nitondra moto ihany koa no heverina fa nanao ny asa ratsy nifofo ny ainy. Voalaza fa mpiasan’ny tobin-dasantsy iray eny Alakamisy Anosiala ity lehilahy ity, ary handeha hanao « versement » teny Mahitsy no izao nisy nifofo izao ny ainy. Ny vola tany aminy no heverina fa antony nifofoana ny ainy. Raha dinihina, mety ho olona mahafantatra azy sy ny programany no tompon’antoka na nampaniraka olona nanao ny asa ratsy. Tena mirongatra ny tsy fandriampahalemana manodidina an’Antananarivo, indrindra tato anatin’ny andro vitsy.